Xaaskeyga Waan Jeclahay Balse Dhibaataa Jirta! |
Maxamuud Axmed Muuse — November 14, 2018
Waa sheeko aan aad ula yaabay markii aan ukuurgalay labo lammaane oo aad isugu buuqsan. Waxay aheyd habeen jimce ah, waxaan soo aaday xaafadayda anoo maraya dhabaha guriga gala ayaan arkay labo qof oo aad umurmaaya waan istaagay mise waxaa is haysta nin iyo naag. Waxaan isku dayay in aan socdo balse waxaan cod dheer ku maqlay qof leh war ninow kaalay nakala saar ani iyo ninka qofkii khaldan?
Wax walba oo aan jeclahay waxaan ka hormariyaa xaaskeyga waxaan ku fakaraa in aysan dareemin wax dhib ah.
Waxkasta oo ay dalbato iyo waxaysan dalban ba waan uqabtaa waana uraadshaa xattaa haddii aanan awoodin waan raadshaa anoo ka duulaya jaceylka aan uqabo. Dhibta jirta waxay tahay xaaskeyga ma qadarin jaceylka aan u hayo balse maalin walba xaaskeyku waxay aadaa aroosyada, xafladaha ka dhacaya magaaladda, mararka qaarna suuqa iyo meelaha bulshadu isugu timaado.
Waxaan xaaskeyga ka codsaday in ay ila joogto oo waqtiga annagu wada qaadano oo wada sheekeysano oo noqono kuwo waqtiga ay haystaan ka faaideysta iyagoo jeceyl iyo muxubo isku muujinaya. Xaaskeygu waxay igu jawaabtaa maxaan iska ag qabanaynaa annagu, intaas waan wada joognee IWM. Waxaan su’aal weydiiyay gabadhii oo dhahay maxaa ka jira waxa uu odaygu sheegaayo? Waxay igu jawaabtay waa run waa ay jiraan inta uu sheegay. Maxaa sababay in aad saas sameyso? Waxay igu jawaabtay ani iyo ninkeyga afar sano ayaan isqabnaa marke asxaabtayda ayaan la baashaalayaa oo waqtigayga siinaya waayo habeenkii ayaan wada joognaa muxuu rabaa ninku?
Cunno waan udiyaarshaa, wax walba oo uu jecel yahay waa u sameeyaa aboowe.
Waxaa iga soo baxday sheekadaa labada lammaane arrimaah soo socda
In gabadhu aysan haysan faham guud oo ku filan xagga qoyska ah
In ay san aqoon diineed u laheyn sida xuquuqda ay isku leeyihiin.
In ay qurux moodey in xafladaha la aado.
In baahida ninka ay ka hormariso qancinta asxaabta kale
In ay ilowday in amarka ninkeeda la addeeco wixii aan ka aheyn macaasi.
Waxay ilowday in ninkeeda haddii uu ka raali ahaado, ayna la timaado wixii la farad yeelay in ay janadda galayso bilaa xisaab.
Nabigeena (NNKH), waxa uu yiri ( Haddii qof ku amri lahaa inuu u sujuudo qof kale, naagta ayaan ku amri lahaa inay ninkeeda u sujuudo, xaqqa uu ku leeyahay weynaantiisa awgeed).
Waxa kale oo uu yiri ( Naagi waxay wejiga eebbeheed ugu dhowdahay kolkay gurigeeda dhex joogto. Salaadda ay ku tukato gurigeeda daaradiisa ayaa kaga fadli badan tan ay ku tu kato masjidka, salaadda ay ku tukato guriga dhexdiisuna way kaga fadli badan tahay tan ay daaradda ku tukato, halka ay salaadda ay gogosheeda ku ag tukataa ay kaga fadli badan tahay tan ay guriga intiisa kale ku tukato).
Xuquuqda uu ninku ku leeyahay naagtiisa waxaa ka mid ah: Inay isdaryeesho, isna asturto iyo in ay ka waantowdo weydiisashada wax aanu awoodin.
Waxaa haweeneyda waajib ku ah inay ninkeeda daacad u ahaato una yeesho wax kasta oo uu ka dalbado, aan ka ahayn inay Eebbe ku caasido. Haddaba xaqqa uu ninku ku leeyahay naagtiisu waa wax aad u weyn oo haddii ayan gudan gaarsiin kara Naar, hadday gudatana Janno ku geleyso.
Waxaa Rasuulka (NNKH) laga weriyey inuu yiri: (Naag kasta oo dhimata ninkeedoo raalli ka ah, Jannaday gashaa).
Waxaa la sheegay in ayaamihii Rasuulka (NNKH), nin safrayey uu naagtiisa amar ku siiyey inaanay kasoo degin dabaqa sare oo ay ku jirtay, isagoo aabbeheedna dabaqa hoose ku jiray. Dabeeto aabbihii baa bukooday, markaas bay Rasuulka (NNKH) u dirtay dad si uu ugu oggolaado inay aabbeheed usoo degto.
Markuu Rasuulku (NNKH) ogaaday amarkii ninkeedana waxa uu ku yiri: (Ninkaaga hadalkiisa yeel). Aabbihii waa uu dhintay, say mar kale Rasuulka (NNKH) amar weydiisatay, saa wuxuu ku yiri: (Ninkaaga amarkiisa yeel). Kolkii aabbihii la duugay buu Rasuulku (NNKH) ergo usoo diray ugu bishaareysa in Eebbe ugu dembi dhaafay aabbeheed amarkii ninkeeda oo ay yeeshay awgii.
Waxa uu Rasuulku (NNKH) yiri: (Naagtu hadday shanta tukato, bisha soonto, cambarkeeda dhawrto, ninkeedana amarkiisa fuliso, waxay gashaa Jannada Eebbeheed).
Caa’ishah (Alle haka raali noqdee) waxaa laga weriyey inay tiri: (Gabar baa Rasuulka “NNKH” u timid, markaas bay ku tiri: “Rasuulkii Allow gabar baan ahay lasoo doontay, mana jecli guurka ee muxuu yahay xaqqa uu ninku naagtiisa ku leeyahay?.
Markaas buu yiri: “Hadday madaxa ilaa gondaha carun kaga yaal leefid ku dhammaysana gudi kari mayso xaqqa uu ku leeyahay”. Markaas bay tiri: “Miyaanan markaa guursanayn?”, suu ku yiri: “Mayee guurso isagaa kuu khayr badane”).
Ibnu Cabbaas (Alle haka raali noqdee) waxa uu yiri: (Naag baa u timid Rasuulka “NNKH”, kuna tiri: “Waxaan ahay naag madax-bannaan ah, waxaana doonayaa inaan guursado, ee muxuu yahay xaqqa ninku?”.
Markaas buu ku yiri: “Xuquuqda ninku uu ku leeyahay xaaskiisa waxaa kamid ah in hadduu doono inuu u galmoodo iyadoo Rati dushii saaran aanay ka diidin). Riwaayad kale waxay leedahay: “Ninku hadduu xaaskiisa u yeero haka yeesho, xitaa hadday Tinnaar muufo ku dubayso”.
Tags: Xaaskeyga Waan Jeclahay Balse Dhibaataa Jirta!
Next post Soomaaliya, Itoobiya, iyo Eritrea Ma Noqon Karaan 1-Dal?
Previous post Habka Nafta Loo Miisaamo!